Sida loo Isticmaalo Twitter | Martech Zone
Sida loo Isticmaalo Twitter
Talaado, Agoosto 9, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Kahor intaadan ku jeesjeesin Macluumaadkaan, maanta uun waxaan la shaqeeyay macmiil runtii u baahan istaraatiijiyad uu kula shaqeeyo Twitter. Waxaan u maleynayaa in sawirkan muuqaalku uu siinayo talobixin dhawaaq ah dadka waawayn oo leh talooyin aad u fiican oo dhan. Istaraatijiyad ganacsi ganacsi (B2B), waxaan kugula talinayaa laba istiraatiijiyadood oo kala duwan macaamiishayda:
Marka hore, waxaan kugula talinayaa inay raacaan hoggaamiyeyaasha barta Twitter-ka ee shirkadooda, bilow wadahadal lala yeesho, kor u qaad boggooda 'tweets' markii ay fursaddu soo baxdo, iyo inaad xiriir la sameysid iyaga khadka tooska ah. Dad aad u tiro yar ayaa si fudud ugu biiri kara Twitter-ka waxayna heli karaan kuwa raacsan oo ku filan si ay isla markiiba uga faa'iidaystaan ​​isticmaalkiisa Inteena kale, waxaan u baahanahay inay naga garawsadaan asaageena oo naloo baro shabakadaha asaaga. Iyada oo ku dhowaad 29k raacsan, waa sababta aan isku dayo inaan fiiro gaar ah u yeesho dhiirrigelinta dadka kale! Qof baa sameeyay markii aan wax yar haystay!
Marka labaad, waxaan ku talinayaa inay iyagu raac rajadooda. Markaad kobciso rajadaada barta Twitter, waxaa jiri doona fursado badan oo aad kula macaamili karto. Marna ma ogaan doontid goorta rajadu u baahan tahay caawimaaddaada… la joogo markay weyddiistaan!
Waad ku mahadsan tihiin dadka Twiends waayo infographic weyn!
Samee Yoolal Kahor Barnaamijka Mobilada